Maamul goboleed kulminaya gobolada Shabelooyinka & Jubooyinka lagu dhawaqay – SBC
Maamul goboleed kulminaya gobolada Shabelooyinka & Jubooyinka lagu dhawaqay
Maamul goboleed lagu magacaabo Dooxada Cagaaran ayaa maanta lagaga dhawaaqay magaalada Muqdisho caasimada dalka, waxaana la sheegay in maamul goboleedkani kulmindoono gobolada Jubooyinka iyo Gobolka shabeelaha hoose .
Xaflad balaaran oo loogu dhawaaqayo maamul goboleedkan oo ka dhacday muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay xildhibaano ka tirsan Baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya, iyagoona halkaasi ka jeediyay qudbado ay ku sheegeen in ay ku dar dar gelinayaan maamul goboleedkaasi .
Xildhibaanad Caasha C/laahi Ciise waxay ka mid tahay baarlamanka KMG ah ee Soomaaliya, waxayna ugu hambalyeysay xubnihii aas aasay maamul goboleedka Dooxdada Cagaaran, iyadoona sheegtay in hadii ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamanka ay la shaqeynayaan maamulkan cusub .
Tan iyo intii uu soo baxay dastuurka Federaalka KMG ah lana sheegay in Dowlada KMG ah noqoneyso mid midnimo qaran islamarkaana ay dowladu Federal maamul goboleedyada u dhaxeyso ah ayaa waxaa soo baxaya maamul goboleedyo la magacaabayo.
Horay ayaa magaalada Nairobi Xarunta dalka Kenya waxaa loogu magacaabay maamul goboleedyo gaar ahaan maamul goboleed la sheegay in uu ka howlgalayo gobolada Jubooyinka kaas oo weliba madaxweyne loogaga dhigay mid ka mid xildhibaanada DKMG ah .
Cali Maxamed Axmed (Cali Luckyman)